प्रचण्डलाई जुत्ता हान्ने रतन भन्छन् : प्रचण्ड मेरो प्रिय नेता हुन, आवेगमा घट्ना भयो - दर्पण संसार
प्रचण्डलाई जुत्ता हान्ने रतन भन्छन् : प्रचण्ड मेरो प्रिय नेता हुन, आवेगमा घट्ना भयो
२०७६ चैत्र ५, बुधबार १६:४७ बजे
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि जुत्ता प्रहारको आरोपमा पक्राउ परेका जुम्ला सिन्जाका रतन तिरुवाले आफ्नो आवेश र आवेगका कारण उक्त घट्ना घटेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो प्रिय नेता भएको समेत बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट आज अपरान्ह ५ सय धरौटीमा रिहा भएलगत्तै तिरुवाले रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन् । उनले भने,‘म विद्यार्थी हुँ, कर्णालीबाट अध्ययनको लागि नै काठमाडौं आएको हुँ। एउटा विद्यार्थी हुनुको नाताले आफ्नो राज्यप्रति, भूमीप्रति, देशप्रति माया र प्रेम गर्न पाउनु अथावा गर्नु स्वभाविकै कुरा हो ।
तिरुवाले आफू जनयुद्धको सहिद परिवारको सदस्य समेत रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘प्रचण्ड मेरो लागि प्रिय लिडर हो । तर, त्यहाँभन्दा अझ प्रिय सत्यता छ । संसार सत्यतातिर छ । म पनि युवा हुनुको नाताले सत्यतिर लागिरहेको थिएँ । उहाँमाथि जुत्ता प्रहार गर्ने कुनै मेरो ईन्टेन्शन थिएन् । म एउटा सामान्य मान्छे हुँ । एउटा गरिबको छोरा हुँ ।
कर्णालीबाट पढ्न आएको हुँ । लोकसेवा स्टुडेन्टपनि हुँ । हिजो जनयुद्धदेखिको अहिलेसम्मको बाटो हेर्दै गर्दा कतै कहीँ चुकेकोजस्तो, उहाँ चाहीँ आफ्नै लिडर भएको नाताले, केही कमिकमजोरीहरु देखिँदा युवाको नाताले आवेग, आक्रोश हुनु स्वभाविक होजस्तो मलाई लाग्छ ।’ उनले आफू ५ सय धरौटीमा रिहाई भएको समेत जानकारी दिए ।
उनले थपे,‘अर्को कुरा, दुर्घटना हुनु एकदम दुःखद् कुरा हो । तर, नचाहँदा नचाहँदैपनि घट्नाहरु हुन्छन् । घट्छन् । त्यही भएको हुनाले अब यस्तै हो । दुर्घटना भैहाल्यो । भएरपनि १७, १८ दिन भित्र बसेर आज रिहा भएको छु । अरु यस्तै हो । ठीक छ । भोलि, पर्सी बोल्दै गरौंला ।’
उनले आफूलाई सोही प्रकरणमा यत्रो दिन हिरासतमा नराखेको भए हुनेथियो भन्ने आशय व्यक्त गरे । उनले भने,‘मेरो स्वास्थ्यपनि ठीक छैन् । पछि, कुरा गरौंला ।’ उनले आफू सहिद परिवारको सदस्य भएको सुनाउँदै आफुहरुको छुट्टै पीडा र व्यथा रहेको दुःखेसो पोखे । उनले दोहोर्याए,‘म आवेग र आक्रोशमा आएँ । हुन त उहाँहरुले मलाई त्यहीँबाट छोड्नपनि सक्नुहुन्थ्यो । यत्रो दिन हिरासतमा नराखेको भएपनि हुन्थ्यो ।’
उनले आफूले ठूलो कुरा नभएर अपमान मात्रै गर्न खोजेको जिकिर गरे । उनले भने,‘म आवेग र आक्रोशमा आईहालें । मैले मिस्टेक गरिसकेको थिएँ । तर, उहाँले त्यहीँबाट पनि छोड्न सक्नुहुन्थ्यो क्या । तर, मलाई यत्रो दिन हिरासतमा राखियो । उहाँले ल ठिक छ त भनेर भनेको भए त्यतिवेला छाड्न सकिन्थ्यो । यसलाई म गम्भिरको रुपमापनि लिँदिन् । देशको परिस्थिति त्यही छ । त्यहीअनुसार मलाई त्यहाँभित्र राखियो । र, आज छोडियो । त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन् ।’
तपाई भाईरल भैसक्नुभएको छ ? अब तपाई सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने कि सामान्य जीवन व्यतित गर्ने भनेर सोधेको प्रश्नमा तिरुवाले भने,‘यस्तो छ म एउटा विद्यार्थी हुँ । अहिलेको टाईम भनेको नै शिक्षा ग्रहण गर्ने टाईम हो । म पढिराख्या छु । मैले सर्बेतिरको अमिनी सकेर लोकसेवाको तयारी गरिरहेको छु । प्लस टु पनि गरेको छु । अहिले म विद्यार्थी हुँ । पढिरहेको छु । भोलि के हुन्छ ? कसले कहाँ देखेको हुन्छ र ?’
उनले आफूले प्रचण्डसँग धेरैपटक भेटवार्ता गरेको समेत स्मरण गराए । उनले भने,‘मैले भनिहाँले, उहाँ मेरो प्रिय नेता हो । धेरैपटक उहाँसँग भेटेको छु । उहाँ प्रिय नेता हो, तर त्यहाँभन्दापनि ठूलो सत्यता छ । जनता सत्यताको खोजीमा छन् ।’
उनले देशका सबै नेताहरुले देश बनाउनकोलागि काम गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए । उनले भने,‘सबै नेताहरुले देश बनाउने काम गर्नुपर्छ । लोककल्याणकारी काम गर्नुपर्यो । एउटा युवाको नाताले पनि हाम्रो चासो त्यही हुन्छ । हामी देश बनेको हेर्न चाहन्छौं । भत्केको हेर्न चाहँदैनौं ।’ उनले प्रचण्डमात्रै नभएर शेरबहादुर देउवाले पनि अब मोडिफाई गरेर जानुपर्ने सल्लाह दिए ।
उनले आफूलाई अहिलेसम्म सुरक्षासम्बन्धी कुनै धम्की नआएको नसुनाए । तर, भोलिको बारेमा भन्न नसक्ने उनले सुनाए । उनले भोलिका दिनमा व्यक्तिगत रुपमा सुरक्षाको प्रत्याभुतिको लागि भने सरकारसमक्ष आह्वान गरेका छन् ।